Vahaolana mangatsiaka mahazatra
Fitsaboana efitrano mangatsiaka mahazatra Ny efitrano mangatsiaka dia toerana itahirizana ireo vokatra fambolena madio. Ny asany dia ny fitazonana ny fitoniana ny tontolo iainana maripana ambany. Ny fampisehoana insulate thermal dia matetika ...
Efitra mangatsiaka ho an'ny voankazo sy legioma
Efitra mangatsiaka ho an'ny voankazo sy legioma Ny sakan'ny mari-pana ao amin'ny trano fitehirizana voankazo sy voankazo dia 0-8 generally amin'ny ankapobeny. Ity mari-pana ity dia mandrakotra ny tontolon'ny fitehirizana ny melon sy ny voankazo. Ny ora fitehirizana dia ao ...
Fampirantiana Ningbo 2019
Fampirantiana Ningbo 2019 Mba hanitarana bebe kokoa ny tsena anatiny sy ivelany, hanamafisana ny fampiroboroboana ny angovo mpamokatra angovo avy amin'ny masoandro sy ny fitaovana fampangatsiahana, hampivelatra ny fanondranana vokatra, ary mandritra izany fotoana izany hatrany ...